Abavelisi bePhaneli yeacoustic kunye nababoneleli - China iPhaneli yeacoustic yeFektri
Igumbi lezemidlalo Iphaneli ye-acoustic
Iphaneli ye-acoustic eyenziwe ngomgangatho yenziwe nge-MDF borad ekumgangatho ophezulu kwaye inendawo ebonakalayo kwindalo esingqongileyo, ilangatye elikhuselayo kunye nemisebenzi yokungena manzi. imibala eyahlukeneyo kunye nokugqitywa kokukhetha kunokuzanelisa zonke iimfuno zomthengi kunye nokucacisa. xa kuthelekiswa nepaneli ye-acoustic ene-grooved, iphaneli eyenziwe ngomthi inegalelo elingcono ngokuchasene nesiphumo.
Ukufakwa kwe-Eco kunye neWall Acoustic panel yeplanga
Iplanga leplanga le-Acoustic lenziwe ngomgangatho ophezulu we-MDF borad kwaye inendawo ebonakalayo kwindalo esingqongileyo, ilangatye elikhuselayo kunye nemisebenzi yokungena manzi. imibala eyahlukeneyo kunye nokugqitywa kokukhetha kunokuzanelisa zonke iimfuno zomthengi kunye nokucacisa. xa kuthelekiswa nepaneli ye-acoustic ene-grooved, iphaneli eyenziwe ngomthi inegalelo elingcono ngokuchasene nesiphumo.
Iipaneli zomthi ze-MDF zokungenisa isandi
Iipaneli ze-MDF ezenziwe ngomthi zenziwe ngebhodi ekumgangatho ophezulu ye-MDF. Ngokwe-acoustic kunye nokuhonjiswa kwemfuno yomthengi, iphaneli yethu ye-acoustic yeplanga inokuxhotyiswa ngemeko-bume ebalaseleyo yendalo, idangatye kunye nomsebenzi wokungena manzi, nokuba inemibala eyahlukeneyo kunye nokukhetha kokugqiba.
Panel isilingi Wood, iinkuni ive
Iphaneli yokufaka isilingi yeenkuni, iinkuni ze-acoustic yindawo engaphambili, watyhoboza umva wepaneli yezixhobo ezigqityiweyo ezinokusebenza okuhle kwe-acoustic elungileyo. Isetyenziswa ngokubanzi ukuhombisa indlu kunye neefestile zentengiso. Ngale phaneli, sinokuhlala kwindawo enokuthelekiswa okunokusizisela ukonwaba ngakumbi. Igumbi elineli lenjongo likwabonisa incasa ephezulu yomnini.
Ngaphakathi ukuhombisa i-mdf yeplanga yeplanga ye-acoustic
Iphaneli ye-acoustic yemithi yindawo yangaphambili, eqhekeze umva wepaneli yezixhobo ezigqityiweyo ezinokusebenza okuhle kwe-acoustic. Isetyenziswa ngokubanzi ukuhombisa indlu kunye neefestile zentengiso. Ngale phaneli, sinokuhlala kwindawo enokuthelekiswa okunokusizisela ukonwaba ngakumbi. Igumbi elineli lenjongo likwabonisa incasa ephezulu yomnini.
Iphaneli yoboya bokhuni, ipaneli yokhuni i-acoustic, uboya beenkuni
Iphaneli yoboya beplanga yokhuni, ipaneli yokhuni ye-acoustic, uboya beenkuni ngoku yinkokeli kudidi lweemveliso ze-acoustical-panel. Ezi paneli ze-acoustic zeplanga zomthi ziqhuba kakuhle ngokufunxa isandi ngelixa zibamba ubushushu; Ngokwemvelo, uboya be-acoustic bulula ukuvelisa; kunye neepaneli ziyafumaneka kubukhulu obuninzi kunye nokwahluka kwemibala okunokuthi kuyilelwe ukulingana phantse nawuphi na umhombiso.
Ezi paneli zefayibha zomthi ezi-eco-friendly neziqinisayo azigcini ngokwenza igumbi lenziwe ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo, kodwa iipaneli zoboya be-acoustic zeenkuni zikwanciphisa ukuphindaphinda kunye nokuvuselelwa kwakhona ngokufakwa kwesandi. Iibhodi zoboya beenkuni zinokuguqula i-aesthetics kunye ne-acoustics yayo nayiphi na indawo yangaphakathi.
Ibhodi yesamente yokhuni, ibhodi yoboya beenkuni, iizilebhu zoboya
Ibhodi yesamente yokhuni, ibhodi yoboya beenkuni, iizilebhu zewulu ezenziwe ngokhuni zenziwe nge-65% yefayibha yendalo yepoplar exutywe nesamente engama-35%, eneempawu zokungavakali kwesandi kunye nokuhonjiswa. Uhlobo lokuhombisa lwangoku lwephaneli ye-acoustic yesamente eyenziwe ngomthi yanelisekile ngabantu abaninzi. Kukho uhlobo lombala onokukhethwa, itshathi yemibala yeVinco inikwe ireferensi yakho. Iphaneli yesamente eyenziwe ngomthi isetyenziswa ngokubanzi kwiholo yesalathiso, kwiholo yomboniso, kwigumbi lokuhlangana.
Iipaneli zodonga ezihonjisiweyo ze-3d, i-acoustic soundproof, udonga lwe-acoustic
Iphaneli ye-Acoustic yenziwe nge-100% yefiber polyester. Le nto inokubuyiselwa kwi-100%. Yomelele, kulula ukuyisebenzisa, kulula ukuqhubekeka, inokwenziwa kwiimo ezahlukeneyo ngokweemfuno ezahlukeneyo. Olu lwazi lulandelayo yiphaneli esemgangathweni ye-acoustic apho sinokunqumla nayiphi na imilo eyenziwe ngokwezifiso ngenxa yemfuno zabathengi.
Iphaneli ye-Acoustic yokuthintela umsindo, i-acoustic wall tile, iphaneli yodonga lwe-acoustic
ukunciphisa ingxolo ngoxinano oluphezulu
I-polyester fiber yenziwe njenge-cocoon cotton shape nge-high-tech eshushu eyona milinganiselo ilinganayo yokufakwa kwesandi ukuya kuthi ga kwi-0.9.
Ubume bendalo bemathiriyeli obufumanekayo kwiindidi zala maxesha imibala elula yokuhombisa.
Ukufunxa iphaneli, ipaneli ye-acoustic eyi-3d, izinto zokufunxa, iiphaneli zodonga ezingavakaliyo
Ukunciphisa ingxolo ngoxinano oluphezulu.
Ifayibha yePolyester yenziwe njengecocoon imilo ngobuchwephesha obuphezulu bushushu owona mlinganiso wokutsalwa kwesandi uphezulu ukuya kuthi ga kwi-0.9.
Ubume bendalo bendalo obufumanekayo kwiindidi zala maxesha imibala elula yokuhombisa.
Igumbi le-Acoustic, iiphaneli zodonga lwelaphu, ilaphu elisongelwe iiphaneli ze-acoustic, i-acoustic yesandi
Igumbi le-Acoustic, iiphaneli zodonga lwelaphu, amalaphu asongelwe kwiiphaneli ze-acoustic, i-acoustic yesandi inendawo ebanzi yokufunxa isandi kunye nomlinganiso ophezulu wokufunxa kwe-acoustic, kunye nefuthe elingcono lokufakwa kwesandi kwisantya esiphantsi, esiphakathi kunye nesiphezulu. Ukuchasana kobushushu obuphezulu, ukunganyangeki ngumkhenkce, kunye nokuguga, ukumelana zezona mpawu ziphambili zomgangatho welaphu le-acoustic. Ezi mpawu zifezekisa uluhlu olubanzi lokusetyenziswa kwepaneli yelizwi le-acoustic.
Inqanaba lokhuselo lomlilo lifikelela kwinqanaba B likazwelonke, kwaye ukhuseleko kwindalo esingqongileyo kwinqanaba le-E1 yesizwe. Ngobhetyebhetye obuhle, ipaneli yelaphu ye-acoustic yenziwe ngezinto ezithambileyo.